Fikambanana fampivoarana tantsaha Nanavotra mpamokatra 600 000
Fikambanana iray niorina tamin’ny taona 1998 ny « Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha » na ny FIFATA.
Teny am-piandohana dia tany amin’ny Faritra Vakinankaratra sy Amoron’i Mania ihany no niasany saingy ankehitriny kosa dia faritra 12 manerana ny Nosy no efa ahitana azy ireo. Tokantranona tantsaha mpamokatra 400 isa no notohanany teny am-piandohana ary efa mahatratra 6 hetsy izany ankehitriny. Anisan’ny nanampiany ireo tantsaha ny fanomezana fiofanana sy ny torohevitra maro samihafa entina hanatsarana ny vokatra ary ny fampidirana ireo tantsaha amin’ny sehatry ny fandraharahana. Mankalaza ny faha-30 taona niorenany ny fikambanana. Ankoatra ny tolo-tanana izay efa nomeny ireo tantsaha dia hiroso amin’ny fitadiavana lalam-barotra maro samihafa indray izy ireo amin’ny 30 taona ho avy. Hetsika goavambe no entin’ny FIFATA hanamarihana izany manomboka ny alatsinainy 09 septambra ho avy izao, ao Antsirabe renivohitr’i Vakinankaratra. Ankoatra ireo atrikasa maro samihafa hifanakalozana hevitra amin’ireo tantsaha mpamokatra sy ireo matihanina dia hisy ihany koa ny diabe hotanterahin’izy ireo ny 12 septambra ho avy izao. Mpamokatra 700 isa avy amin’ny faritra 12 no ho avy hanome voninahitra sady hampitombo traikefa ihany koa.
Pati / J.Mirija